जाडाे मौसममा अलैंची खाँदा नसाेचेका फाईदाहरु ! जानिराखाै - ज्ञानविज्ञान
मानिसहरु अलैंचीको प्रयोग मसलामा र माउथ फ्रेसनरको रुपमा मात्र प्रयाेग गर्दछन् । चियामा राखिएको अलैंचीले यसको स्वादमा वृद्धि गर्दछ । अलैंचीको फाइदा यसमा मात्र सिमित छैन ।
यदि तपाईं अलैंची खाएर तातो पानी पिउनुहुन्छ भने तपाईंले यसको दोब्बर फाइदा प्राप्त गर्नुहुनेछ । भारतका आयुर्वेदिकका विज्ञ अबरार मुल्तानीले अलैंची स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक भएको बताउँछन् । हेर्दा सानो हुने अलैंचीको काम भने ठूलो छ ।
यसले खोकी, दम, पिसाब पोल्ने समस्यामा फाइदा पुर्याउँछ । यसले मुटु र गलाको मलिनतालाई टाढा राख्छ । मुटुलाई बलियो बनाउँछ । मुखको दुर्गन्धबाट राहत पाउन पनि सहयोग गर्दछ । पत्थरीलाई फुटाउँछ ।
यसले जन्डिस, पिसावजन्य रोग, छाती पोल्ने, पेट दुखाई, दम, पत्थरी र जोर्नीको दुखाई भएमा अलैंचीको सेवन लाभकारी हुन्छ । यदि राती सुत्नु अघि अलैंचीलाई तातो पानीसँगै खानुहुन्छ भने यसले दोब्बर फाइदा पुर्याउँछ ।
पेट घटाउन सहयोग पुर्याउँछ
कपाल झर्न रोकिन्छ
स्पर्म काउन्ट बढ्छ
रक्तसंचार ठिक हुन्छ
पाचन क्रिया बलियो
Topics #अलैंची #अलैंची खाँदा नसाेचेका फाईदाहरु
Don't Miss it जाडोमा हिटरकाे प्रयोग गर्नु हुदै छ ? सतर्क भएर गर्नुहोस्, जानसक्छ ज्यान !
Up Next विचार गर्नुहोस् ! बिहान अबेरसम्म सुत्नेहरुलाई लाग्छ यस्ता भयानक रोग